Sida loo wadaago faylasha shabakada Linux | FromLinux | ChrisADR | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo wadaago faylasha shabakada Linux
ChrisADR | | GNU / Linux, Shabakado / Adeeg, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Midkani wuxuu aadayaa saaxiibkeen Claudio, oo doonaya inuu barto sida loo habeeyo shabakad Linux ah iyadoo aan la isticmaalin Samba. Faallo aan saaxiibtinimo lahayn, Claudio wuxuu codsanayaa abuurista GUI si uu u awoodo inuu qabto shaqo ay kumanaan (haddaanay ahayn malaayiin) dad ahi hore u qabteen wayna sii wadi doonaan inay qabtaan ... maaddaama shaqadan badankeed ay ku jirto qunsuliyad, mana jecla Inta badan waxay doorbidaan inay abuuraan GUI si ay si fudud ugu isticmaali karaan (ugu yaraan Windows sida uu sheegayo) shabakadiisa gudaha. Aynu marka hore wax yar ka gudubno xalka ka hor.
1 Habka ganacsiga vs FOSS
1.1 Shirkad noocan oo kale ah waxay ku nooshahay barnaamijkeeda softiweerka
1.2 Waxaa loo sameeyay inay kaa dhigto mid kugu tiirsan
2 Baahida waa hooyada uunka
2.1 Markaad faylasha ku wadaagtid daaqadaha waxaad abuureysaa godad amniga ah
2.2 Looma baahna
3 Xoogsheegashada weligeed xal ma noqon doonto
4.1 Maxay muhiim u tahay helitaanka macluumaadka dhexe?
4.2 Ma allifanayo baaruuda
4.5 Dukumiinti rasmi ah (Isbaanish ah !!)
4.6 Ku rakib serverka iyo macmiilka
4.7 Isku habee adeegaha
4.8 Dib u fur adeegaha
4.9 Ku xirmaan server
4.10 Fur biraawsarkaaga
5 Fikirka ugu dambeeya
Habka ganacsiga vs FOSS
Hagaag, aan ka dhigno mid fudud tan iyo bilowgii ... Tani waa wax had iyo jeer laga sheegto mashaariicda FOSS (Software Free and Open Source), la'aanta tayada shaqada. Had iyo jeer waan maqli jiray, laakiin sida juego waxaa fiican inaad ka iibsato shirkadda tal maxaa yeelay way kafiican tahay, barnaamijka noocan oo kale ah waa mejor marka loo eego nooca bilaashka ah, nidaamka noocan ahi waa mejor mid kale oo bilaash ah. Aan aragno sababta tani u tahay:
Shirkadda tal Viva barnaamijkaaga
Haddii aan ahay shirkad shaqadayduna tahay inaan iibiyo softiweerka, taasi waxay ka dhigan tahay inaan si aad ah wax u iibiyo wanaagsan dadku inay iibsadaan, sidaas darteedna waa inaan iibsadaa mushahar horumariyeyaashayda si ay u helaan, waana tan meesha laga bilaabayo arrintan, softiweer bilaash ah mararka qaarkoodna il furan ayaa waxaa soo saaray niyad wanaag. Dadku mushaar uma helayaan inay wax horumariyaan inta hartay. Marka hadaad ii sheegto sidee tahay software o nidaamka ama wax kastoo ay yihiinba way ka fiican yihiin nooca bilaashka ah, si fiican ayaan kuu sheegayaa, malaha, laakiin dhibaato weyn ayaa ka jirta taas:
Waxaa loo sameeyay inay kaa dhigto mid kugu tiirsan
Tani waxay lamid tahay daroogada, hadba inta ay leegtahay software-ka lahaansho ee aad isticmaasho, waxaa yaraanaya awoodda aad u leedahay inaad ka fikirto oo aad wax iskood ugu xalliso Aynu kaliya ka fikirno tan ilbiriqsi, miyaad ogtahay meesha aad ka kasbato wax badan, iibka ama dayactirka? Hagaag jawaabta tan waa mid fudud, iyadoo aan loo eegin sida uu qaali u yahay barnaamij ama nidaam, macaashka dayactirka marwalba wuu ka weynaan doonaa faa iidada iibka, maxaa yeelay waqtiga dhibaatooyinka, dhib malahan qadarka lacagta ee ay tahay in la maalgashado si loo xaliyo maxaa yeelay sifudud ma awoodo bedesho kaabayaasha waqtigaas.
Baahida waa hooyada uunka
Dariiqa aan saaxiibtinimada lahayn ee loo codsado GUI maahan sabab ku filan in la sameeyo, isla mar ahaantaana, waan ka xumahay haddii ay waxyeello u geysato Claudio, laakiin waxaan hayaa waxyaabo badan oo muhiim ah oo aan sameeyo iyo mashaariic aan ka qaybqaato si aan waqtigayga u galiyo xallinta la'aantaada is-maamul iyo miyir-qabka maskaxdaada. Laakiin tan iyo markii aad weydiisay, waa hagaag, waxaan sharaxaad ka bixin doonaa sababta aysan wali u jirin GUI weli wax taas jira Windows waa wax fudud.
Markaad faylasha ku wadaagtid daaqadaha waxaad abuureysaa godad amniga ah
Halkan in ka badan ayaa ii sheegi doonta inaan khaldanahay iyo iwm iwm ... laakiin runtu waxay tahay marka aad isticmaasho nmap Si loo aqoonsado kumbuyuutarka daaqadaha, laga yaabee haddii ay ku jirto shabakad "aamin ah", waxay ku shaqeyn doontaa adeeg dekedda qaar si ay awood ugu yeelato inay wadaagaan faylasha. Kani ma aha oo kaliya khatar, laakiin waa wax aad u yar oo la og yahay in badan oo ka mid ah weerarada guuleysta ay soo ifbaxaan dartii wadaagista marin looga helo shabakadda. Laakiin maxay tani u soo ifbaxday? Waa hagaag sababtoo ah falsafada Windows wuxuu ku barayaa inaad dhahdo SI iyadoo aan si dhab ah loo ogeyn waxa dhacaya. (Xusuusnow ku tiirsanaanta?) Hab aad u fudud oo lagu xallin karo tani waxay noqon kartaa in si wanaagsan loo daryeelo qalabka, laakiin sida falsafada Windows maahan taas, halkaan ayaa ah meesha dayactirka wuxuu soo galayaa ciyaarta, wuxuuna kugu qasbayaa inaad u baahan qof inuu wax kuu qabto.
Haddii baahidu tahay hooyada uunka, iyadoon loo baahnayn, markaa waxba ma jiraan. Tani waa wax aad u fudud in la fahmo, haddii dadka adeegsada (badanaa nidaamka maamulka, ama dadka adeegsada server-yada) aysan u baahnayn, ma abuuri doonaan. Xaaladaha khaaska ah (badanaa software-ka bilaashka ah) abuurayaashu waxay xoogaa cagaha saaraan cagaha kuwa khibrad yar u leh oo go’aansada caawimo abuurista GUI (Git wuxuu leeyahay GUI kuwa doonaya inay tijaabiyaan), laakiin markale, tani waa daahir niyad wanaag abuureyaasha, tan iyo inta ay le'eg tahay shaqada dhabta ah waa mid aad u weyn, horumariyayaashuna aad u yaryihiin, in shaqooyinkaas dib loogu celinayo wakhti lacag la'aan ah ka timid horumariye naxariis leh. (Xusuusnow in qofna lacag kaa siinayn inaad sidaas sameyso, walina waxaad leedahay qoys, shaqo iyo masuuliyado)
Xoogsheegashada weligeed xal ma noqon doonto
Tan u qaado talo ahaan iyo faallo dhammaan kuwa akhriyay, waxaan xasuustaa wax badan oo fiidiyoow ah oo aan mar arkay oo ku saabsan wareysiga Obama (qof aan u arko tusaale weyn oo qof ah), halkaas oo nin xanaaqsan uu bilaabay inuu dhaleeceeyo oo caayo mana uusan sameynin gabi ahaanba waxba. Waxba ma uusan sameynin, maahan inuu awoodo, taasi waa, inuu ahaa ninka ugu awooda badan meeraha waqtigaas, laakiin maxaa yeelay wuxuu ogaa inaysan aheyn inuu hoos u dhigo heerkaas. Taasi maahan, xalna uma noqon doono noloshan, dood la galo waligood wax wanaag ah ma keenayo, waxaa jira dad laga yaabo inay rumeysan yihiin inay taasi jirto, laakiin ugu yaraan cabsigelinta iyo faallooyinka X-ga ah ima dhaqaajin doonaan. dabacsan kahor intaadan bilaabin casharka.
Nidaamka Diiwaanka Shabakada waa borotokool heer-codsi ah oo bixiya macluumaad dhexe y wada shaqeeya shabakad, waxay u shaqeysaa labadaba nidaamyada Linux sida Windows iyo kuwa kale (taasna waxaa ugu wacan qaabeynta heerka dalabka). Sida aan u hadlayno sidaas dhexe, waxay ka dhigan tahay inaan wajaheyno xalka qaabka macaamiisha / Server. Waxaan horeyba u taabnay arimahan korkaaga daqiiqad kale, laakiin ma jiraan wax kale oo aan ku xoojineyno faahfaahin yar.
Maxay muhiim u tahay helitaanka macluumaadka dhexe?
Qof kale ayaa odhan doona, «laakiin waxaan hayaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan nooc kasta oo mishiin ah oo aan haysto, laptop-kayga shaqada, kombiyuutarka gurigayga, iwm iwm ». Dhibaatadu waa tan soo socota, haddii qaab hufan oo wax ku ool ah la raaco, mid ayaa ogaan lahaa in abuurista iyo dayactirka kaydadka dhibco badani ay dhib badan tahay, aad uga fudud tahay (dhammaanteenna kuwa adeegsada qoraallada iyo kuwa kaleba) waa in la abuuro hal dhibic oo ay xogtu timaaddo halkaasna ka bilow inaad ilaaliso xogta. Intaa waxaa u dheer isagoo noocyo badan Meelo kala duwan maahan oo kaliya inay adkeyso in la raaco macluumaadka, laakiin sidoo kale waxay ka dhigeysaa shaqada mid sii murgsan.
Ma allifanayo baaruuda
Kuwa iyagu ilbiriqsi rumeysan in aan tan ku ogaaday tijaabo iyo qalad, maxaa yeelay wax runta ka fog ma jiraan, kaliya waxaan u isticmaalaa wax yar oo ka mid ah wixii Google i siiso oo aan aragno wixii aan ka helay baaristii ugu horreysay (waxaan u qaadan doonaa inay ku sugan yihiin Ubuntu kuwa isticmaala, waxaana u maleynayaa Fedora in isbeddelku ugu yaraan yahay)
Leh Christopher Diaz Riveros
Had iyo jeer raac waxa ku qoran Oficial. Tani waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka ugu horreeya ee la raaco, waxaana u dhigay haddii ay dhacdo in qof kasta u maleeyo inaan wax ka ogahay NFS ka hor intaan qorin qoraalkan.
Aad u dheer; ha aqrin. Mar kasta oo ay arkaan ereygan oo la soo gaabiyay, waxay hubin karaan 100% inay tahay "habacsanaanta" habka lagu xalliyo dhibaatada, qaar badan ayaa sheegan doona sida loo ogaado haddii ay tahay Ingiriis, si fiican, hadda way garanayaan sidaa darteed ma jiri karto ikhtiyaar ay ku andacoodaan hadhow Waxaan aad u isticmaalaa dicciontary-ka magaalooyinka si aan u fahmo in badan oo ka mid ah fikradahan.
Dukumiinti rasmi ah (Isbaanish ah !!)
Ruux qalbi qalbi furan ayaa qaatay shaqadii tarjumida ee noo ahayd boggan fudud laakiin dhameystiran oo leh wax kasta oo lagama maarmaan u ah in lagu rakibo adeegaha NFS shabakadeena.
Aynu si deg deg ah u aragno tallaabooyinka la raacayo. Adiga ayaan kaaga tagayaa link kuwa xiisaha leh ee aan u adeegsan karin Google sababaha X si ay u gaaraan isla goobta.
Ku rakib serverka iyo macmiilka
Hadda waxaan rakibeynaa Console waxa looga baahan yahay labada meeloodba si loo isticmaalo faylasha la wadaago. Server-ka aan ku rakibno nfs-kernel-server iyo macmiilka nfs-common
Isku habee adeegaha
NFS waxay ku shaqeysaa feyl isku xir ah oo ku yaal /etc/exports. Faylkani wuxuu u sheegayaa NFS faylasha la wadaagayo iyo sida loo waco, marka lagu daro tusaalayaal aad u wanaagsan oo ku saabsan sida ugu habboon ee loo isticmaalo, waxaan isticmaali doonaa console si aad wax uga bedesho mahadsanid marwalba oo lagu kalsoonaan karo vim (kuwa aan ku raaxeysaneyn vim way isticmaali karaan nano)
Tusaalahan fudud waxaan u sheegayaa dhoofinta inaan rabo inaan la wadaago galkayga workspace (the * waxay muujineysaa inaan doonayo inaan wadaago waxayaabaha oo dhan anigoon ka tagin booska waxaan qoraa rukhsadaha iyo xulashooyinka igu habboon aniga, kiiskan rw qoraal iyo akhris)
Dib u fur adeegaha
Haddii aan si fiican u qaabeynay, waxaan u baahanahay inaan dib u bilowno adeegaha (ama aan bilowno haddii uusan firfircooneyn), maahan muhiim mar kasta oo isbadal yimaado, laakiin waxaan qaataa fursad aan ku caddeeyo, haddii aadan rabin inaad dib u bilowdo wax walba, fudud exportfs -ra xali arinta.
Sadarka koowaad systemctl start nfs-kernel-server firfircoonida adeegaha, tan labaad ayaa ah kaliya in la xaqiijiyo in wax waliba ok yihiin (hadii uusan cagaar aheyn, ok maahan).
Ku xirmaan server
Hadda waxaan isku xireynaa qalabkeena kale, taas ayaan u isticmaali doonnaa console, iyo amarka mount.
Halkan waxaa habboon in la xoojiyo in IP-yada loo qoondeeyay waxaad jeceshahay, ma aqaano haddii ay isticmaali doonaan DHCP ama buug-gacmeed, laakiin markay helaan IP-ga way isticmaali karaan, waxay ku darayaan : / path / to / your / galkaaga iyo meel aad ku dhajin karto isku xirka, kiiskeyga waxaan abuuray galka la yiraahdo compartido.
Halkan labadooduba waa qaab ahaan console sida ku qoran GUI. Aniguna waxaan ku tusayaa xoogaa sida aan u fuliyo shaqadayda machadka, marwalba waxaan u adeegsadaa mashiinno macmal ah si aan uga shaqeeyo macluumaadka koorsooyinka, (taasi waa sababta ay u arki doonaan OSX la rakibo) iyo mid luqad kasta leh, sidaa darteed waxaan lahaan karaa jawi horumarineed iyo Ha iga buuxin barnaamijkayga 'Gentoo' barnaamijyo aan loo baahnayn. Maxaa ubuntu? sidoo kale waan ka jeclahay in ka badan Fedora waana dhakhso badan tahay in la abuuro mashiinno tijaabo ah oo aan dhaqso u tirtiri karo sidoo kale. Sidii aan idhi 🙂 qof kastaa wuxuu raacaa falsafadiisa wax walbana diyaar ayuu u yahay isticmaal fikir la'aan Waa wax Ubuntu wax badan uga fududaynaysa adeegsadayaasheeda 🙂 (marka lagu daro taas waxaan sameeyay shahaadadayda oo ah maamule nidaam ee Ubuntu (LFCS waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku siiso saddexda qoys ee waaweyn ee nidaamka) Ubuntu (Debian), CentOS (Red Hat) iyo SUSE (SUSE) )), markaa waxay ahayd hab wanaagsan oo lagu xasuusto apt-get y apt)
Hore ayaan wax badan u qoray markan, laakiin sida aad u arki karto Claudio, waa 4 talaabo oo kaliya (waxaan rajaynayaa inaad kaligaa samayn karto mid Google ah si aadan u tirin), oo bal qiyaas waxa… aadan ubaahanayn GUI shan amar. Waan ka xumahay haddii aanan fulin karin hamigaaga ah inaad adduunka ka dhigto GNU / Linux oo lagu daro Windows, oo aan kaa hor istaago inaad xoogaa ka fikirto oo aad barato google walax. Iyo hadaad rabto inaad isbedel joogto ah kuhesho shabakadaada iyo qalabka /etc/fstabHagaag, waa inaad adigu iskaa uhesho.
Dadka kale oo dhan, fadlan iga raali ahaw haddii aan qallafsanaaday qoraalkan, in kasta oo aan u qoray xoogaa niyadda (waa inaan qiraa in qofna uusan jeclayn in shaqadooda iyo dadaalkiisa wax laga weydiiyo, iyo xitaa in ka yar in la iigu yeero jabsada) ... Runtii waxaan rajeynayaa inay tani ka caawin karto in ka badan hal shaqadooda isku xirnaanta. Aad baad ugu mahadsantahay imaatinkaaga in kasta oo aan qalloocsanahay iyo khaladaadkeyga, Salaan 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo wadaago faylasha shabakada Linux
Waxaan raacay tillaabooyinka Manjaro (Arch) maalinti shalay mana aysan ii shaqeyn aniga (Waxaan la wadaagayaa Samba) iyo Thunar iyo Nautilus plugins plugins
Marka laga hadlayo "daaqadaha", waxaan u maleynayaa in KISS ay tahay FLOSS aan habooneyn. MS WOS sidoo kale waxaa jira waxyaabo qalafsan oo la sameeyo, labadoodaba xaaladooda uma muuqato wax u fiican isticmaalaha.
Maxaa diidaya inaad bixiso qoraal ama baako xirmaysa oo rakibaysa oo qaabaynaysa NFS halkii aad ka koobiyeyn lahayd oo aad ku dhajin lahayd 5 amar?
Kuwa badani kuma dhiirraan kan ugu horreeya, aad bay uga yar yahiin kan labaad
Oo haddaan ku darno qalabka loogu talagalay saamiga NFS ee Thunar iyo / ama Nautilus (ama kuwa kale) oo u roon FLOSS iyo KISS, ama maya?
Mana qoro inay tahay shaqada gurigaaga, laakiin waan ku farxi lahaa haddii qof uu sameeyo (Samba sidoo kale rikoodhka) oo u adeegsado qalab kale oo "loogu beddelo" dadka GNU / Linux oo muujinaya sida ay u fududahay in la wadaago galka ka badan NFS (ama Samba) si aad uga isticmaasho Smart TV-ga Kodi
Maxaad isku dayi weyday inaad adigu sameyso? Si kale haddii loo dhigo, haddii aad u malaynayso inay lama huraan tahay oo waxtar u leedahay DUFANKA iyo KISSKA, markaa horay u sii wad oo wadashaqeyn lala yeesho bulshada habkaas.
Jawaab Octavio Sánchez
Waxaa iga maqan aqoontaas, barnaamijyada.
Taasi dhinaca kale waa u yartahay kuwa iyaga haysta oo doonaya inay sidaa yeelaan.
Hadana haddii aad tahay arday barata cilmiga kombuyuutarka oo raba inuu ku soo bandhigo wax sidan oo kale ah CV-gaaga, si fiican.
Marka la eego waxa ii shaqeeyay, la qabashada SAMBA Waxaan horeba ugu daabacay cashar kooban oo ku saabsan madasha Manjaro kuwa ka faa'iideysan kara https://forum.manjaro.org/t/suggestion-samba-and-or-nfs-shares-and-plugins-easy-by-default/34169/4
SI AAD UGU MACAANSAN YAHAY MACAAMIISHA AASAASIGA AH, SIDEE AYAAN Uga TAGNAA ADEEGYADAN FALAN EE DEFAULT?
Jawaab RAFAEL PRESILLA
Waad salaaman tahay Rafael, si aad ugaga tagi karto si caadi ah bilowga mashiinka waa lagama maarmaan in wax laga beddelo faylka / iwm / fstab si ay si toos ah ugu xirmaan shabakadda, maadaama taasi waxoogaa takhasus yar tahay waxaanan u arkaa inaad ku weydiisato jawi ganacsi, waxaa jira tixgelinno kale oo xagga amniga ah sida rukhsad iyo magacyo gelitaan, dhibco marin, marinno, iyo kuwo kale. Salaan 🙂
Hagaag, waxaan ka bilaabayaa aduunkan Linux, waana aqriyay wax walboo aad dhawaan daabacday, ma fahmin macnaha guud ee qoraalkaaga waxaana ula jeedaa dagaalka aad kula jirto Claudio, laakiin runti waan qadariyaa waqtiga aad ku bixineyso qoristooda hada la wadaag aqoontaada, waxa ugu yar ee aan qaban karno ee aan iska bixinaynin, waa inaan si xushmad leh kuugu akhriyo! Aad baad u mahadsan tahay oo aad ayaan kuugu hanbalyeynayaa shaqadan aadka u fiican.
Ku jawaab Carlos Diaz
Nabadeey Carlos, halkan waa iskuxirka macnaha guud
Ma ahan dagaal aad u badan, taasi waxay la macno noqon laheyd inaan rajeynayo inaan ku sii socdo mowduuca, laakiin markaan aqriyo macnaha guud waxaan rajeynayaa inaad fahmi karto sababta niyadeyda xun, ama haddii kale waan buun buuniyay xaaladda, labada xaaladoodba maahan wax aan doonayo inaan sii wado
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga, runtiina waa sababta oo ah faallooyinka sidan oo kale ah ayaan ku faraxsanahay inaan qoro oo laga yaabee inaan la wadaago wakhti wanaagsan dhammaantiin inaad akhristaan ​​qoraalladan 🙂 Salaan
boostada wax walbo waa hagaagsan yihiin, waxa aanan sameyn »wadaag» haba yaraatee waa in OBAMA UU YAHAY QOF FUDUD !!!!! mid kamid ah RAGII UGU WEYNAA EE KU DHACA TAARIIKHAHA ISRAEL…. Wadaagida galka wuxuu noqonayaa macluumaad yar kadib akhrinta ESO.
Waxaan isticmaalaayay Linux sanado badan waxaanan kula talinayaa asxaabteyda adeegsata Linux, laakiin fadlan, wax Obama waa mid aad u xoogan.
Mahadsanid Ivan, waad ku mahadsan tahay waqtiga aad siisay inaad wax ka dhiibato oo aad wax la wadaagto. Hagaag, waxaan u arkaa Obama waxa aan u arko (waana wax shaqsi ah, waad la wadaagi kartaa ama maya, laakiin waxaa mudan in halkan lagu cadeeyo) waxyaabaha sida waa:
Kuwa mar hore akhriyay qoraalladayda kale, halkan iyo meelo kale, waxaad ogaan doontaan inaanan ahayn qof "siyaasadeed" aad u macno weyn u leh ka warqabka arrintan, runtiina waa mid ka mid ah arrimaha aan sida gaarka ah u daneeyo. Waxaan jecelahay inaan isku dayo, laakiin waa inaan sameeyaa markii loo baahdo. Sida Trump laftiisu u sheegay waxyar kadib markuu madaxweyne noqday ... "tani way ka dhib badantahay sidii aan moodeeyay" ... waxaan horey uga wada hadalnay inay jiraan madow, cadaan iyo hadh, laakiin waxaan u arkaa in sida dhabta ah ee lagu aqoonsan karo ay tahay in la ogaado DHAMMAAN macnaha ... iyo Taasi waa wax go'aannada siyaasadeed ay aad u adag yihiin sababo la xiriira nooca macluumaadka intiisa badan.
Haddii aan iraahdo waxaan u arkaa qof wanaagsan, waxay ku saleysan tahay astaamaha hoggaamineed ee toggan ee uu muujiyey muddadii uu joogay xafiiska dowladda, ma dhahayo inuu dhan walba kaamil ka yahay, laakiin wuxuu leeyahay astaamo badan oo mudan in la ahaado looga dayday Waxaan rajeynayaa inay tani awood u yeelatay inay mawduuca ka dhigto wax yar oo cad.
Adiga Taringa waad waalan lahayd.
Mise waan ka tagi lahaa isla marka aan ards tixgaliyo 🙂
Samba aniga ahaan waxay buuxineysaa dhammaan shuruudihii aan u baahnaa, hadda waxaan ku dhex wadaa shabakad ganacsi oo leh isticmaaleyaal iyo kooxo isla markaana oggolaansho u leh faylalka qaarkood oo ku saleysan astaanta isticmaalaha, si fiican ayaan u shaqeynayaa waxaanan leeyahay daaqado iyo macaamiisha Linux.
Jawaab carlos zevallos
Hagaag runti waligay kuma soo galin adduunka isku-dhafka daaqadaha iyo windows-ka, runtiina waxay iga dhigaysaa xiise, laakiin way fiicantahay inaad jeceshahay iyo yaa og, hadaad ku dhiiratid inaad maqaal ka qorto write salaan 🙂
Carlos, samba waa mid aad u wanaagsan in lala wadaago shabakad Windows-Linux ah, laakiin arrinta ayaa ah markii aad leedahay shabakad LAN ah oo keliya Linux. Samba ma shaqeynayo kiiska dambe waana inaad fulisaa dhammaan tillaabooyinka uu ku tilmaamay ChrisADR.
Anigu ma aanan hirgelin, laakiin sida aan uga akhristo shabakadda:
waxaad ku rakibi kartaa serverka samba ee Linux sidaas darteedna muhiim ma ahan inaad yeelato daaqado si aad ugu adeegsato shabakada.
Bogga kale: https://www.driverlandia.com/instalar-samba-para-compartir-carpetas-en-linux-debian/
Waxaan u arkaa tan iyo Win7 inay jiri karaan dhibaatooyin xagga sirta ah, laakiin waxay kaliya saameyn ku yeelan doontaa macaamiisha win7,8,10 ee ma ahan macaamiisha Linux ee isticmaali doona samba server la Linux ah.
Openuse yast wuxuu leeyahay nfs module, wax fikrad ah kama lihi arimahan, maxaa intaa ka badan, manjaro-kayga maalin dhaweyd waxaan iska fogeeyay baakadaha nfs sababtoo ah gabi ahaanba ma isticmaalo, markasta oo aan wax yar barto waxbaan ka soo saaraa Cunto macaankeyga gnome ee aan ogaadey inaysan waxtar ii aheyn, waxyarna tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib uguma qabo in haddii qoraaga boostada uu i dhigo Gentoo, wuxuu wali rakibayaa 200 baakado ka yar oo aan ku sameeyo wax kasta oo aan ku sameeyo manjaro, illaa jaahilnimadayda awgeed dabcan ay jabtay.
Ugu dambeyntiina, mowduucan, waa inaan tilmaamno waxa uu Richard Staliman leeyahay marar badan barnaamijyada bilaashka ah ee macnaheedu maahan inay bilaash tahay, waxaan u maleynayaa in bulshada maanta aan la qabsanayno bixinta lacag dhan taleefan casri ah oo ay ka buuxaan software gaar ah oo aynaan garanaynin wax kasta oo ay qabato. taas bedelkeedana waxaan dooneynaa barnaamij bilaash ah oo wax walba noo fududeynaya oo bilaash ah, waa inaan sidoo kale la qabsadaa fikirka xoogaa iyo raadinta kiiska qoraalkan wax fikrad ah kama haysto nfs laakiin waxaan arkay in ugu yaraan furitaanka uu jiro qaab muuqaal ah , Ma aqaano inay fiicnaan doonto iyo inay xun tahay.
Manjaro wuu ka weyn yahay kana dhakhso yar yahay Gentoo.
Laakiin haddii aad rabto inaad tijaabiso Gentoo (sidoo kale) waxaan kugula talinayaa Sabayon.
Waa Gentoo horey loo sii rakibay oo fudud, wax yar ama ka yar waxa Manjaro ilaa Arch yahay.
Waxaan haystaa Sabayon mashiin kumbuyuutareed oo waxaa jira farqi aad u badan oo udhaxeeya sabayon iyo gentoo marka loo eego manjaro iyo archlinux, sabayon wuxuu adeegsadaa entropy oo ah maareeyaha guud ee xirmada (equo on console and rigor on graph) oo ah baakado labalaab ah, waxay leedahay xirmo laakiin ma aqaano kugula talin inaad isticmaasho wax badan. Manjaro iyo arch waxay leeyihiin maamule isku mid ah, bedelida horeyba manjaro waxaad ku rakibtay wax badan iyo qaabeyn iyo keydinta, gentoo taa badalkeeda waa inaad isticmaasho sawiro aad ku soo aruurineyso xulashooyinka koodhka guente, waxaan nahay farqi aad u weyn oo leh sabayoon oo ku siinaya baakado taas oo ka timaadda 'gentoo' laakiin leh xulashooyinka guud.
Mar aan fogeyn waxaan sidoo kale la tacaalaayay arimahan, markii qofku bilaabayo Linux waa wax laga xumaado inaan la helin xalal deg deg ah ama codsiyo ay tahay inay yeeshaan waxqabadyo aanna ahayn nidaamyo adag. Waan ixtiraamayaa waana u mahadcelinayaa kuwa horumariya ee waqtigooda qaata, oo jecel inay si wanaagsan shaqadooda u gutaan, waxay i bareen haddii qofku wax bilaash wax ku qabanayo ama ay tahay inaan si fiican loo qaban maxaa yeelay halkaas ayey ku taal shaambada shaqsiyeed. Laakiin waxaa jira xad-dhaaf ah. Linux waa laga xumaaday maxaa yeelay inta badan waa wax qasan in la sameeyo habraacyo lana rakibo shaqooyinka iyo dhamaan kuwa wax dhisaya kuwaas oo, awood u leh inay horumariyaan shaqadooda, u daayaan inay ku xirnaadaan amarro terminal dheer. Tan kale ee xad dhaafka ah ayaa ah inay jiraan isticmaaleyaal ka socda "qolof" in hawl la'aan ama hakad maskaxeed ay rabaan inuu qofku wax walba sameeyo.
Hello Ismael, waad ku mahadsan tahay wadaagista waxaanan rabaa in aan xoojiyo dhawr waxyaalood ... UNIX waxay adeegsataa falsafad cad oo caddaalad ah oo ku saabsan horumarinta barnaamijyada "wax keliya samee, oo si fiican u samee", barnaamijyadan badan awgood waxay qabtaan hal shay oo keliya Waa lagama maarmaan in lagu biiro dhowr si loo xalliyo xaaladaha "kakan". Ma dafirayo inay jiraan wax yar oo barnaamijyo ah oo ka sii fiicnaan kara, laakiin ugu yaraan xagga hoose oo dhan, ma aanan la kulmin caqli xumo xagga barnaamijyada GNU ee lagama maarmaanka ah ama diirka. Waa ayaan darro in fikirkaas xun uu ka dhasho barnaamijka mararka qaarkood liita ee "fikirka ah".
MAHADSANID saaxiib ChrisADR, sida iska cad wax badan ayaad ka ogtahay taada, waan kugu hambalyeynayaa waana kaa cudurdaaranayaa haddii aan xoogaa ku adkaaday faalladaydii hore, qaybta soo-saarista terminal ama gui. Laakiin qoraalkan, waxaad hadda xaqiijisay waxa aan ku haysto sheegashada linux, oo ah hab fudud oo lagula wadaagi karo faylalka shabakadda Linux LAN iyo sida aad si fiican ugu sharraxday qoraalkan aadka u wanaagsan, aad bay iigu dhib badan tahay isticmaale ahaan, inaan sameeyo tallaabooyin aad u tiro badan terminal si aad ugula wadaagi karto galka shabakada Linux lan. Waan ku celinayaa, waad ku mahadsan tahay qoraalkan waana hubaal inuu waxtar u yeelan doono dad badan, aniga maahan, nasiib daro. Wax badan ayaan ka filayaa Linux. Hada, waa inaan sii wadaa isticmaalka Guindous ee shabakadaha LAN. Dabcan, buugayga xusuus qorka ah, waxaan kusii wadaa gacaliyahayga MX Linux.
Xal aad u fudud oo aalaaba aan u adeegsado si aan ugu guuleysto waxaad rabto waa inaad ka faa'iideysataa https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell_Filesystem y https://es.wikipedia.org/wiki/Files_transferred_over_shell_protocol.
Waad salaaman tahay Claudio 🙂 sifiican ayaad ugu mahadsantahay inaad siisay waqtiga aad wax kula qaybsato, waadna ku mahadsantahay raali galintaada, sidoo kale iga raali noqo hadii aan meel xun ku xumaaday Hagaag, in kasta oo waxa aad ii sheegayso ay tahay wax laga xishoodo, haddana waxaan kuu soo jeedinayaa; Maaddaama ay noqon karto waxtar waxtar leh oo in ka badan in ka badan ay u muuqato inay xiiseyneyso, waxaan weydiisan karnaa mashruuc in loo hirgeliyo iyada oo ah soojeedin horumarineed personally Shaqsiyan ma haysto waqti ama xarun aan ku sameeyo barnaamij dhan oo aan ka soo billaabo, laakiin waxaa laga yaabaa in asxaabteennu laga bilaabo Nautilus (GNOME) ama Dolphin (Plasma) ayaa ku haysan kara liistadooda waxa la qabanaayo ilaa qaar kale oo horumariyayaal ahi ay iibsan karaan waqtiga, oo ay u badan tahay inay aniga wax badan iga dheereeyaan :)
Hadaad jeceshahay fikirka, waxaan isla arki karnaa sida iyo halka loo daabacayo soojeedinta hagaajinta, yaa og oo waxaa laga yaabaa in wax la mid ah mar hore lagu kariyo meel 🙂 Salaan
Waxaan rakibay 'Syncthing' dhib badana kama qabin. Waxaan halkaan ugu darsanayaa bedel ahaan.
Waa salaaman tahay, waxaan qirayaa in maadaama ChrisADR uu ku socdo boggan aan sugayo midka soo socda, kaliya waad ka baranaysaa, waad ku mahadsan tahay taas, amar kale oo ku sii wad mid ka mid ah qodobbada boostada.
Macnaha guud waa inaan nuqulo feylasha qaar ka mid ah ATM-yada oo aan u gudbiyo server (GNU / LINUX), waxaan ku shaqeynayaa nidaam kayd ah, laakiin waxaan leeyahay shuruud ah inaan la shaqeeyo ATM-yada (ATMs) mana furi karo wax dekedo ah, sidoo kale ma haysto adeeg wareejinta faylka shabakada daaqadaha, ma isticmaali karo ftp sidoo kale. Kaliya ma haysto qalabkii loogu talagalay taas, waa adeeg gaar ah mana jiro qalab loogu talagalay.
Laakiin waan ogahay inay jiraan wax la mid ah SSH iyo SCP oo ay si wada jir ah u yihiin aalado aad u ammaan badan oo ilaa halkaas fiican, laakiin sidee baan SSH ugu rakibayaa daaqadaha? mana ahan barnaamij ii ogolaanaya inaan isticmaalo borotokoolka, waxaan ubaahanahay wax badan oo noocyo badan leh, waxaan ubaahanahay wax leh interface CLI, sida iska cad waxba kama aqaano, intii aan baarayay waxaan helay maktabad Python ah oo kuu ogolaaneysa inaad adeegsato borotokoollada shabakadaha kala duwan iyo inaad sameyso cilmi baaris ku saabsan sida ay u shaqeyso, hada Waxaan hayaa nidaam shaqeynaya, oo aanan u isticmaalin samba ama SFN laakiin waxaan ku wareejin karaa feylasha anigoo adeegsanaya hab maamuus wanaagsan oo aamin ah.
Meesha aan doonayo inaan kula helo tan ayaa ah anigoo garanaya Python iyo ogaanshaha inay wax jiraan (ssh), dhammee howsha la ii siiyay, haddii aan qof kale ahaan lahaa waxaan dhihi lahaa, taasi macquul maahan, waxaan u baahanahay inaan awood u yeesho dekedaha ama aan dhaqaajiyo astaamaha daaqadaha ama taas ma jiro qalab ii ogolaanaya taas.
mana galayo mawduuca, laakiin haddii aad i weydiiso sababta aan uga doorbidayo CLI GUI, si fudud CLI-da ayaa dib loo isticmaali karaa taasina waxay siineysaa awood aad u badan oo ka sarreysa garaafka. Qalab CLI ah ayaa loo isticmaali karaa barnaamijyada kale (duubaya) garaafka waxaa kaliya loogu talagalay isticmaalaha.
Waad salaaman tahay 🙂 Hagaag, aad baad ugu mahadsantahay waxaad dhahday, waadna ku mahadsan tahay sidaad khibradaada u wadaagtay
Sidaad xustay, CLIsku waa sida sixirka daaha gadaashiisa, oo aan had iyo jeer la aqoonsan, laakiin la'aantood wax badan oo la arki karo (GUI) dhammaantood ma shaqeynayaan.
Ha quusan, xusuusnow in isticmaalaha Windows-ku uu yahay mid qaas ah mana ahan ilaa nidaamkani uu burburiyo jiritaankooda in mararka qaarkood ay bilaabaan inay su'aal ka keenaan waxtarkiisa, xitaa kadib ay ku noqdaan si ay u adeegsadaan.
Isticmaalayaasha Windows waa legion, qaarna waa ka jinni badan yihiin kuwa kale, loomana baran inay akhriyaan dukumiintiyada, taasi waa sababta markii aad u keento deegaanka GNU / Linux ay dhibaato badan u soo gaarto.
Waxaan aad u isticmaalaa macluumaadkaaga, waad ku mahadsantahay wadaagista.
Jawaab Arturo J. Ducoing O.
eurekaaaa, ugu dambayntii waxaan helay wixii aan u baahnaa, "isha furan waxaa lagu horumariyaa niyad wanaag." Taasi waa mid cad oo aad loo amaano, waxaana la arkaa inuu jiro qof baahi isku mid ah ii qabay oo horumar sameeyay (ama la wadaagay) wax kasta oo aan akhriyi kari waayey, xal aan aad u dalbaday. Haa, ee rabitaan wanaagsan, isagu "wuu wadaagay" aadna waan ugu mahad naqayaa. Laakiin sida hordhaca qoraalkani u leeyahay, "waa inaad lacag ka qaadataa xalalka wanaagsan", sida iska cad anigu lacag kama qaadi doono, laakiin ma dhigayo isku xirka halka aan xalka ka helay, maxaa yeelay waqtigeygu waa qiimo badan yahay, anigu lacag kama qaado laakiin ... waqti ayey qaadatay in la helo. Kaliya waxaan ka faalloon karaa kuwa xiiseynaya isla markaana isku walaacsan, inaad ka heli karto yuotube. 🙂
Sidee u fududahay in "la dalbado" xalka oo qof ha siiyo waqti si uu kuugu sharaxo si faahfaahsan oo weyn adiga oo aan wax lacag ah kugu soo dallicin. ChrisADR (oo aanan garanaynin) wax dinaar ah kamaan qaadin taas, laakiin waxaad si danaysi ah u sheegataa inaad heshay ilo kale oo qof kale, oo aan faa'iido doon ahayn, la wadaago, adiguna waad diidaysaa inaad siiso isku xidhka (habka, baahi looma qabo). Ma aqaano cidda aad tahay sidoo kale, laakiin waxaan ogahay in dabeecaddaadu ay ka tagto waxyaabo badan oo la jeclaan karo. Xusuusnow in "xalka wanaagsan" (taas) ay tahay in lagu soo oogo) adigu adigu ma sameyn oo qofka sameeyay ayaa sameeyay, sidoo kale wax lacag ah kama uusan bixin. Marka taasi kaliya waxay kuu rogaysaa dulin (nooca saadaalinta. Xiriir dhow oo mid ka mid ah ka qeyb galayaasha (dulinka ama martida loo yahay) ay ku tiirsan tahay kan kale (martida ama martida loo yahay) oo waxoogaa faa iido ah laga helayo.) Xusuusin: Waxaan ku dhejiyay macnaha si aadan dhib ugu qabin inaad raadiso, maadaama waqtigaaga aad u qiimo badan yahay.
Jawaab Rams Castaway
Hagaag sida muuqata waa inaad waxoogaa xumaan ah madaxaaga ku haysid, maadaama aad maalin kasta ka faa'iideysato macluumaadka ay dadku halkan ku dhigaan iyagoo raali ka ah oo marka "sida ay tahay" aad u hesho wax qiimo leh aad diido inaad la wadaagto, si looga fogaado tan koontadaada ayaa socota In lagaa joojiyo, IP-gaagu waa xaddidan yahay waxayna u badan tahay inaad sameyso baaritaanno joogto ah si aadan dib ugu soo geli karin FromLinux maxaa yeelay haddii beeshani wax leedahay, waa inay u tahay dadka, maahan dulin.
Marka hore waad ku mahadsan tahay boostada, waxay ahayd mid aad waxtar u leh, in kastoo aysan u sahlaneyn sida ay doonayeen inay u rinjiyeeyaan, raadinta intaa ka sii badan. Si kastaba ha noqotee, waxaan u arkaa inay tahay wax aad u foolxun oo aan meesha oollin dhammaan hordhaca iyo faallooyinka aan wax lug ah ku lahayn dhibaatada, haddii kale qoraagu ma uusan doonayn inuu si fiican uga jawaabo, qof kale ayaa ka jawaabi doona mana ahayn inuu ugu yeero samaritan wanaagsan ka dib markii uu macluumaadka ku soo oogay dembiyo. . Sikastaba, mahadsanid. Marka laga hadlayo in ay lacag qaadaan iyo in kale, ama haddii ay wax walba u qabtaan "jacaylka dadka kale" ma aha sabab loo sameeyo wax "kala badh" iyo "Google qof kale", maxaa yeelay maahan in qof walbaa ogaado wax walba ama "nuqul iyo ku dhajinta »xeerarka macnaheedu waa isticmaalka madaxaaga ama inaad wax fahanto. Waad salaaman tihiin dhamaantiin iyo subax wanaagsan
Waxa aan doonayo ayaa ah inaan ku dhajiyo galka NTFS adag ee aan ka dhaxlay Windows. Waan ka heli karaa oo wax kaga qori karaa mashiinkeyga weyn laakiin kuma kori karo laptop-ka anigoo ku rakibaya labada adeeg ee NFS mashiinka weyn iyo macmiilka labtop-ka. Wax walba waan isku dayay laakiin kiis ma jiro.
Ku jawaab leonidas83glx
Ku odhan maayo dijo
Ku dhaji wax aan fiicnayn wixii ay ballanqaaday.
Ku jawaab notelodigo
Bishii ugu horreysay ee wada jir :)
Dagaallada barakaysan: Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn * NIX